Madaxwenaha JFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dalka Dib ugu soo laabtay
Sat, 12/02/2017 - 13:40
Muqdisho:-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kaddib ka qeybgalkii caleema-saarka Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo Shir-madaxeedkii Midowga Afrika iyo Midowga Yurub ee ka dhacay magaalada Abidjan ee dalka Ivory Coast.
Fri, 12/01/2017 - 22:42
Laascaanood:-Waxaa malinimadi Jumcadii ee soo gabagaboobay dawro Loogu magac daray walaalaynta Bulshada iyo la dagaalanka qabyaalada.
Dawradan oo soconaysay muddo 2 casho ah aya waxa loo qabtay Haldoorka Bulshada oo isugu jira ardayda jamacadaha , kuwa secondryada, macalimin iyo odoyal dhaqameed.
Waxa barnamijkan daadihinayay oo tababarkan fuliyay sh Axmed Cabdisamed Cabdalle
Waxana loo tababarayay Haldoorkan sidii ay uga shaqyn lahaayen barnaamijkan una sii gudbin lahaayeen aqoontan ay faaidaysteen .
Dhinaca kale Sh Ahmed Cabdisamed oo kamid ah culimada soomaliyed ayaa maalmihii ugu danbeyay ku sugnaa magaalada laascaanood isagoo muxaadarooyin kala duwan ka jeediyay Masajida iyo jamacadaha magaalada Laascaanood oo dhamaantood ku saabsan ololaha la dagaalanka qabyaalada iyo Bulshadan walaalaynteda.
Nadwo cilmiyeed kooban oo ku saabsan la dagaalanka qabyaalada ayaa waxaa laga jeediyey muxaadarooyin kala duwan waxaana ka mid ahah culumadii ka soo qeyb gashay.
Hoos ka Daawo Muxaadaraadkii laga jeediyey Nadwadii lagu qabtay magaalada Laascaanood ee looga cinwaankeeda uu ahaa Walaaleynta Bulshada iyo la dagaalanka Qayaalada .
1-Horudhac ku saabsan barnamijka walaalaynta Bulshada iyo la dagaalanka qabyaalada ShAxmed Cabdisamad.
2-Qabyaalada iyo mawqifka islaamku ka istaagay Sh Aden weli Cabdi Xusen
3-Walaaltinimada maxaa culeysiiya maxaase diciifiya Sh Jaamac Yaasiin.
4-Maxaa xal u ah qabyaalada Sheekh Axmed Cabdi samed .
Gabagabadii dardaarano dhamaan culimadaa ah iyo proff C/risaaq lafoole iyo Sh Aden Cali Nuur oo kalmado kooban ka ku khatimay.